Kungani izinja eziningi namantombazane bephupha: iphupho ephusheni, inja ephusheni
Ayingaziwa I-Dream Interpreter
Yini ama-puppies angayiphupha ngawo?
Iyini iphupho lapho ubona khona amantombazane amancane? Ukuchazwa
Kubantu abaningi amantombazane amancane aletha injabulo kanye nobubele kuphela. Okufanayo kusebenza kumaphupho, okwenzekile ukucabangela lawa bantwana. Ngaphambi kokuba ufunde ukuchazwa kwesakhiwo, zama ukukhumbula ukuthi yikuphi okubonayo, balala noma baqhwaqhaqhaza, bakha, noma bathula? Njengoba ubuyisele le mininingwane ngememori, ungaqala ngokuphepha ukuhlukanisa lokho amantombazane ayekuphuphile.
Iyiphi intombazane engashoyo ephusheni?
Ngokuqinisekile, uyazi ukuthi inja ibonisa ukwethembeka nokukhonza ngesibindi. Okufanayo kusebenza kumantombazane amancane, kakade kusukela ekuzalweni anezimfanelo ezifanele. Ngokuqondene nabahumushi bamaphupho, bangathola futhi ukufaniswa kwenja ngobungane obuqotho, usizo olungathandeki nokuthembeka. Kodwa kubalulekile ukucabangela ukuthi ukuhumusha kwababesilisa nabesifazane kuzoba okuhlukile, ngakho-ke ake siqale sicabangele ukuthi leli phuzu amaphupho engxenyeni enhle yesintu.
Ukuze intombazane ibe yensimbi, idlale, ithole noma idle i-puppy kusho inhlanhla esheshayo nokugcwaliseka kwalolu hlelo. I-Snovidice izophumelela kunoma yiziphi izinyathelo, ngisho nezinduna kakhulu futhi eziyingozi. Iphupho lithembisa ukuletha ukuvumelana kwangaphakathi noqobo, ukuxhumana nabanye ngeke nje kujabule futhi kukhululekile, kodwa kuzoletha nezinzuzo eziwusizo. Uma ephusheni intombazane ithola i-kitten encane, izincwadi zamaphupho ziphatha lesi sibonakaliso njengomuntu onomusa nomnakekelayo oseduze, ukulungele njalo ukuthola ukuthi inhlalakahle yakhe ibe nobuntu obujabulisayo.
Ukunakekela i-puppy egulayo kusho ukuthi maduzane umuntu ophupha angacelwa usizo. Ngokusobala, kuyoba umuntu wesintu noma umngane.
I-puppy ephusheni yowesifazane oshadile angayifakazela ukuthi empilweni yangempela uyakhathalela ngokweqile futhi unakekela izingane zakhe, umyeni wakhe noma izihlobo zakhe. Lesi sibonakaliso singabhekwa njengesigijimi sokuthi ngeke sikulimaze ukucabanga ngawe, ngaphandle kwalokho ubungozi kuphela ukwengeza okumnandi ekuphileni okuphelele komunye umuntu.
Uma umuntu ephupha nge-puppy, izincwadi zephupho zihumusha le ndaba, njengesizo lokuqala lwabangani, usizo lwezezimali oluzelelwe. Kungenzeka ukuthi ukusebenza okuhle emsebenzini noma ibhizinisi, uzothola umvuzo wezezimali. Uma usondelwa nganoma yiluphi usizo, ungabe unqabe nhlobo, ngoba okuhle kuzokubuyela kuwe kaningi. Ngaphezu kwalokho, ngemuva kwephupho elinjalo, maduze uzohlangana nabangani bakho.
Kungani siphupha ngamantombazane afile?
Konke, ngaphandle kokunye, abahumushi babheka lesi sithombe njengesibonakaliso esingenamusa kakhulu. Kwezinye izincwadi zephupho umuntu angathola incazelo njengokugula okubi kakhulu, abanye bakhuluma ngokulahlekelwa (hhayi ngokufa) noma ukukhashelwa kwabangane noma izihlobo, abanye abahumushi bangathola ukuhumusha okusho ukuhlupheka noma ukuwa kwebhizinisi eliphumelelayo. Kunoma yikuphi, isikhathi esithile emva kwephupho, uzozizwa njengomuntu ongadingekile ephila impilo yakhe ngaphandle. Kungenzeka ukuthi ukumba ngaphakathi kwakho, ukufuna incazelo yempilo, ekugcineni, ingaholela ekucindezelekeni. Ukuzibulala ngesilwane esincane kusho ukukhohliswa ngakwesokunene sakho. Ukusuka kuwe umuntu osondelene naye uzakuphenduka, emva kwalokho uzoba nesihawu kakhulu.
Njengoba ubona, ukubona imboni ephusheni kuyisibonakaliso esinamandla, okuyinto, ngokuya ngesakhiwo, ingathinta kakhulu indlela yethu yesikhathi esizayo. Sithemba ukuthi kulesi sihloko uzitholele ukuhumusha okujabulisayo kuphela!
Ukuba nobulili ephusheni, kusho ukuthini?
Indoda yayilinde: lokho kungasho ukuthini?
Ukuchazwa kwamaphupho: kungani ukufa
Kungani uphupha amakati namakhiti. Izincazelo eziningi ezithandwayo
Ukuchazwa kwamaphupho: Kuyini ukulwa
Yeka indlela okungaqondakali ngayo kuthinta amaphupho ethu
Ukubona umama oshonile ephusheni
Ukubuyekeza kwefilimu "Fly to the Moon"
Ama-antioxidants nama-radicals mahhala
Amapayipi ne-cottage shizi kanye nama-omisiwe
Izinzuzo zamakhukhamba notamatisi ngobuhle nempilo
Kuthiwani uma unesizotha esincane?
Incazelo ye-flower of a daisy
Ukuhlanza indlu kaFeng Shui
I-apula ephikisiwe nge-caramel
Indlela yokusiza umuntu ngemuva kokuhlukanisa nomuntu othandekayo
Ungathatha kanjani ukulethwa inja
Iziphi izicathulo ezingcono kakhulu kwabesifazane abakhulelwe?
Okufanele uhambe ngamapulangwe: izicathulo ezifashini zonyaka ekwindla-ebusika 2016-2017
I-lipstick ebomvu elihle: iziqili namathiphu
Izindlela eziphumelelayo zokususwa kwesisu sesisu
Imikhuba nomthelela wabo kwizezimali
Kuyini ukuhlinzeka okukhulu kwepulasitiki kwe-breast for augmentation